Overnight Interest, Rollover, na Swap Rate - Best Forex ny EA | Expert Advisors | FX Robots
HomeForex SchoolOvernight Interest, Rollover, na Ampifamadiho ny Rate
Tokony ho 5 hariva EST (fotoana miovaova ny sasany mpanakalo) raha toa ianao ka mitana misokatra toerana ny tantara dia na isaina, na debited, Liana anjara-raharaha momba ny tena haben'ny ny misokatra toerana, arakaraka danitra sisiny sy ny toerany eo amin'ny tsena . Arakaraka ny zanabola Differential, dia mety mandoa na mandray tombontsoa saram, fantatra koa amin'ny hoe saram rollover.
Izany zanabola dia antsoina hoe mihodina, Satria miseho rehefa misokatra toerana iray danja daty (ponenana daty) dia nanakodia ho any amin'ny zava-dehibe manaraka daty. Rollover varotra avy hatrany dia nentina nivoaka tamin'ny herinao broker raha mihazona misokatra lasa ny fiovana toerana eo amin'ny daty sarobidy. Ambadiky ny sehatra, ny ponenana mitranga amin'ny raharaham-barotra roa andro. Noho izany, raha eo anoloan'ny 5PM Alatsinainy vola ireo raharaham-barotra fa sarobidy tamin'ny Alarobia, rehefa avy 5PM ny alatsinainy lasa ny varotra Talata daty ka dia natakalo ho sarobidy tamin'ny Alakamisy.
Rollover mihatra toerana mba ho lasa 5 PM Open EST
Rollovers no ampiharina mba hanokatra toerana aorian'ny ora hariva EST 5 sarobidy fiovana eo amin'ny daty, na ponenana daty. Tsy ampiharina raha tsy mitondra ny toerana noho ny fiovana eo amin'ny daty vidy; dia toy izany, raha manokatra na manidy ny varotra alohan'ny 5 ora hariva dia tsy hahazo rollover fiampangana na ny debit.
Alarobia mitondra ny 3-andro rollover
Ao amin'ny 5PM EST ny Alarobia ny lanjan'ny daty niova avy amin'ny zoma ho any ny alatsinainy, ny faran'ny herinandro rollover, izany hoe telo andro rollover (Asabotsy, Alahady, Alatsinainy), izay midika fa ny rollover vola / tombony handeha ho telo heny toy ny rehetra indray andro.
Nahoana no Liana Sary nahazoan-na Debit-miseho?
Satria rehefa misy raharaham-barotra vola ianao, ianao barotra vola. Rehefa mandeha ela amin'ny vola, dia toy ny mihazona ny petra-bola amin'ny banky, ary dia manantena ny hahazoana liana amin'ny petra-bola, ary rehefa mandeha fohy amin'ny vola, dia toy ny nindrana, ary ianao dia manantena ny handoa liana ny findramam-bola. Na sarim lasa sarotra kokoa noho ny tamin'ny vola mpivady, ianao mitana iray vola amin'ny tsara mizana (ny vola ianao dia lava) ary ny iray amin'ny ratsy mizana (ny vola ianao dia fohy), ary ny fahasamihafana eo amin'ny zanabola ny firenena roa dia antsoina hoe ny mahaliana-tahan'ny Differential.
Na dia voalaza na debited dia miankina amin'ny antony roa: 1), raha Hianao no mitana lava na fohy toerana; ary 2) ny zanabola Differential eo amin'ny vola roa teo amin'ny roa ianao fandrantoana.
Koa satria Ilana vola rehetra nindrana vola hividy iray hafa, liana rollover fiampangana dia anisan'ny Forex varotra. Interest no nandoa ny vola izay nindramina, ary nahazo ny olona izay novidim. Raha ny marina, ianao mahazo na handoa liana arakaraka ny fitarihan 'ny toerana. Raha toa ianao ka mividy ny vola miaraka amin'ny zanabola ambony noho ny iray dia mindrana ianao, ny harato Differential ho tsara (izany hoe AUD / USD) - ary ianao dia mahazo vola (ho notanana) vokatr'izany. Raha mivarotra ny vola miaraka amin'ny zanabola ambony noho ny iray dia mindrana ianao, ny harato Differential dia ho ratsy, dia ho hiafara mandoa (ho debited) noho izany rollover. Ny Rollover lany / nahazoan-dalana no miankina amin'ny toerana habeny, ny lehibe kokoa ny toerana, ny lehibe kokoa ny vola lany na tombony ho anao.
Ahoana no fahitanao ny iray zanabola Firenena samy hafa?
Misy toerana maro mba hijery amin'ny aterineto:
Ohatra, www.worldinterestrates.info manolotra ny zanabola amin'ny mora ny mamaky latabatro toy ny anankiray etsy ambany (marina toy Martsa 2013):
Avy amin'ny tabilao etsy ambony, dia afaka manangona fa ny Aostraliana tahan'ny 3.00% be lehibe noho ny Slim 0.25% ny Etazonia. Fa mpampiasa vola, izany dia midika fa hisy vola bebe kokoa ho ela liana amin'ny Aostraliana sy ny maha fohy dolara US dolara (izany hoe, ela AUD / USD). Raha ny marina, amin'izao fotoana izao, misy afaka mahazo vola bebe kokoa ho ela Aussie, ka misy hafa-bola lehibe (ivelan'ny ny Shina sy India), tahaka ny rehetra ambany be ao liana noho ny US dolara.
Ahoana no kajy ny Rollover tahan'ny manokana Miaraka tsiroaroa Sandam-bola (amin 'ny ankapobeny)?
Tadidio fa rollover varotra no nentina nivoaka avy hatrany ny ny forex broker raha hanao toerana lasa sarobidy ny fiovan'ny daty.
Na dia izany aza, noho ny antony samihafa, dia mety ny Hahafantatra ny fikajiana ambadiky ny sehatra.
Eto dia ny rollover kajy raikipohy:
Contract notional sanda X (base vola zanabola --Dahatsoratra vola zanabola) / 365 andro isan-taona base x vola amin'izao fotoana izao ny tahan'ny = isan'andro rollover liana debit / bola
ohatra ny Rollover kajy in USD:
Ianao mividy 1 be AUD / USD raha AUD / USD vidin'ny amin'ny rollover fotoana 1.0486. Ohatrinona ny vola tokony swap / mandray amin'ny 5 PM EST? AUD / USD vidin'ny amin'ny 5: 00 PM Est: 1.0486
Aostralia Borrow Rate = 4.75% isan-annum
US Amboary Rate = 0.25% isan-annumTherefore: $ 100,000 * (4.75% - 0.25%) / 365 * 1.0486
Ankoatra: $ 100,000 * 4.50% / 382.74 = 11.75 isan-dayThat fotsiny ohatra sy ny swap mety hiova isan'andro.
Fanamarihana: Mampiasa ny 365 isika satria ny taham-panafahana hita omena isan'andro. Koa satria ny mpivarotra ihany no mihazona ny toerana misokatra iray indray andro any, tsy maintsy mizara izany amin'ny 365 isika.
Raha te misy fanaovana kajy mahafinaritra mba hanampy anao kajy ny amin'izao fotoana izao mety ho tsara na ratsy rollover dia mety ho voampanga raha toa ka mba hitondra ny toerana nandritra ny andro maromaro, dia afaka mampiasa ny Oanda liana fanaovana kajy.
Ny fanaovana kajy Snapshot ity dia eto ambany:
Azonao atao ny milaza foana ny ora natao ho lehibe noho 24 mba mankasitraka tanteraka ny rollover kajy.
Fanamarihana: io kajy manome anao hevitra tsara ny amin'izao fotoana izao ny tahan'ny rollover ny vola mpivady lava ianao na fohy, fa dia manokana ny tahan'ny Oanda ihany. Ny fahafantarana ny amin'izao fotoana izao ny tahan'ny rollover brokerage manokana, dia afaka mampiasa ny fitaovana etsy ambany.
Quick Fomba Jereo ny Overnight tombontsoan'ny Any roa Any Broker
Raha te-hahalala ny tahan'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny mpivarotra peta-drindrinao manokana ianao, ny sehatra forexe sasany toy ny fionganan'ny FXCM dia mamoaka ireo tahan'ny manokana ireo. Na izany aza, raha miasa miaraka amin'ny MT4 sehatra, dia afaka mampihatra ireto roa MT4 tondro vaovao ny tabilao:
StatMonitor_1.1Phat-.mq4 Mampiseho manitatra, Buy / Sell Swap, Boky mariky ny tabilao
Asehoy Info Pairs.ex4 rehetra Author: Hanover. Mampiseho sarobidy maro fanazavana momba tsiroaroa: Miaraka tsiroaroa Abbreviation [Column1] Ihany, dia asaovy Price [Column2], Taham ny Day Range ho Average Daily Range (koa toy ny%) [Column3-5], Aparitaho (koa toy ny% ny ADR) [Column6-7], Pip Value [Column8], Buy Swap Rate [Column9], Amidio Swap Rate [Column10].
Ny sary roa ireo tondro mora raisina ampiharina ny AUDUSD tabilao ny FXPro mijery tahaka izao:
Ny endriky voalohany, StatsMonitor_1.1Phat.mq4, dia mampiseho ny spread of 20 (izay 2.0 dia mipoitra satria 5 digit broker), swap swap an'ny 14.83 ary fifanakalozana varotra 17.06. Noho izany amin'ny andro fialantsasatra mahazatra, ankoatra ny Alarobia, dia mahazo $ 14.83 ianao raha te haharitra ela eo amin'ny toeran'ny 100,000 raha oharina amin'ny AUD / USD, raha toa ianao ka nandalo ny fotoana handefasana azy, ary mety hahazo ny fandaniana $ 17.06 noho ny fohy 100,000 standard ny loka AUD / USD. Ny famantarana faharoa, Show Info All Pairs. ex4, mampiseho ny vidin'ny vidiny, isan-taona isan-kerinandro, manaparitaka, miala amin'ny pip ary mividy / mivarotra vaovao momba ny marika maromaro, manangona fotoana betsaka amin'ny ezaka hitadiavana ity ampaham-potoana amin'ny paikady ity, pahefana amin'ny paope. Etsy ankilany dia azonao atao ny mahita fa AUD / USD dia manana taham-pivoarana avo kokoa noho ny hafa, izay mety ho fampahalalana mahasoa ho an'ny olona mieritreritra ny mety ho fivarotana manaraka.
Nahoana no Ratsy Swap Rates Ny ankamaroan'ny avo noho ny lafiny tsara Swap Rates?
Ao tena mahay ny tsara sy ny ratsy swap tahan'ny tokony ho mitovy tahan'ny (izany hoe, ao amin'ilay fanoharana ambony, na ny tsara sy ny ratsy swap ny AUD / USD tokony ho 14.83), fa kosa, ny ratsy swap tahan'ny matetika miseho be kokoa noho ny tsara swap tahan'ny. Izany no azo inoana fa tsy rariny fa izany no fomba ny brokerage lalao dia natsangan'i. Raha ny varotra tantara dia hanolotra mitovy isa ny maniry sy ny short nentina avy eo noho 1 andro, ianao, dia mety manana ankapobeny ratsy swap voampanga tamin'ny tanteraka ny rehetra po. Mety tsy nivoaka be fa dia zavatra tsy maintsy miafara factoring ho toy ny vola lany amin'ny varotra.
Azonao atao koa ny mahita fa ny sasany dia hiharan'ny mpanakalo ny ratsy Ampifamadiho ny tahan'ny satria na lava na fohy ny vola mpivady. Raha mahita broker manao izany, dia mety ho tianao ny hamerina handinika manana kaonty aminy.
Ahoana no Aza fandoavana Ampifamadiho ny Rates?
Misy fomba telo fara fahakeliny, dia afaka tsy mandoa Ampifamadiho ny tahan'ny.
1. Trade in Direction ny Tsara Liana.
Afaka mandeha varotra afa-tsy ao amin'ny tari-dalana ny vola izay manome Ampifamadiho ny tsara. Izany dia amin'ny ankapobeny tsy soso-kevitra raha tsy raharaham-barotra tany izany tari-dalana manokana no tari-dalana tsara indrindra eo amin'ny fitiliana sy nandroso indray fitsapana varotra vokatra.
2. Trade ihany Intraday sy Close toerany avy 5: 00 PM.
Ianao dia tsy ny Ampifamadiho satria ao ary teo anatrehan'i rollover ny fotoana. Na izany aza, tsy tokony hanapa-kevitra ny ho lasa iray intraday mpivarotra noho ny Ampifamadiho ny. Ny hany antony izay mety hahatonga anao ho tonga ny intraday mpivarotra tokony ho tetika ary ny fampisehoana vokatra miantehitra amin'ny maha intraday. Tsy noho ny Ampifamadiho ny.
3. Vohay ny Ampifamadiho ny Free Islamika Account, natolotry ny mpanakalo sasany.
Izany no safidy ny hena aterina amin'ny Silamo mpanjifa, raha ny tena marina anefa tsy silamo matetika misafidy ny sokajy, raha nanatitra. Ireo tantara manokana dia nihazakazaka hifanaraka tanteraka amin'ny finoana silamo sy ny politika ny tsy liana mba ho aloa amin'ny raharaham-barotra varotra. Raha mino ianao dia manana tampoka maro varotra, mety mandinika am-piandohan'ny lahatsoratra iray maimaim-poana Ampifamadiho ny tantara Islamika. Manokana, mihevitra aho fa io no tsara indrindra safidy ny telo lahy, ary raha mahita fa ny broker manolotra safidy io, dia Nazoto afany.
Aostralia Borrow Rate
Buy Sell Ampifamadiho ny
Buy Ampifamadiho ny Rate
Inona no azonao atao mba tsy handoa Ampifamadiho ny tahan'ny
Inona no kajy ny rollover tahan'ny ny manokana vola mpivady
Ahoana no iray mahita ny zanabola amin'ny firenena samy hafa
Overnight Interest Rollover na Ampifamadiho ny Rate
Quick Fomba Jereo Overnight tombontsoan'ny Ny mpivady Any Broker
Nahoana no liana bola na ny debit mitranga